Ukufumana izakhono zabasebenzi ngeHodges ngqo, iCandelo leYunivesithi yaseHodges
iindidi: IiHodges ngqo
Wamkelekile kwi-HU ngokuthe ngqo, kwiCandelo lokuBonisa kwiYunivesithi yaseHodges
IYunivesithi yaseHodges ibonelela ngezatifikethi ezijolise kubasebenzi kunye needigri ezifunekayo kwingingqi nangaphaya. Iindawo zibandakanya ukhathalelo lwempilo, itekhnoloji, ishishini, ulawulo, kunye nezemali. Abafundi banokuthatha iiklasi ekhampasini, kwi-Intanethi, nangakumagumbi okufundela obuChwephesha beTekhnoloji (TEC), ebavumela ukuba baye kwiklasi naphi na, bahlala kwi-Intanethi. IYunivesithi yaseHodges ikwabonelela ngokugqwesileyo IsiNgesi njengenkqubo yesatifikethi soLwimi lwesiBini (ESL).
Ukuqala ngendawo elungileyo yeLehigh Acres, i-HU Direct iya kuba nakho ukufikelela kwigumbi lokufundela kunye neofisi yomhlohli, kanye eLehigh Acres, kwi-CRC elungileyo. Iiklasi kunye neeworkshops zinokubanjelwa kwindawo yaseLehigh Acres ngeentsuku nangamaxesha afanelekileyo kubahlali bendawo. IYunivesithi yaseHodges yaziwa ngokujolisa kubafundi abadala, yiyo loo nto uninzi lweenkqubo zibanjwa ngokuhlwa nangeempelaveki ekhampasini, okanye kwi-Intanethi.
Umdibaniselwano ongenakulindeleka-iYunivesithi yaseHodges kunye neeShishini zeGoodwill
Ekuboneni kokuqala, kunokubonakala ngathi iYunivesithi yaseHodges kunye Amashishini aMnandi kuMazantsi mpuma eFlorida ngekhe ifane kakhulu. Nangona kunjalo, kunye nemibutho yomibini esebenza kunye, singakwazi ukujongana ngcono neemfuno zoqeqesho lwabasebenzi kwingingqi yethu.
Zombini i-Goodwill kunye neYunivesithi yaseHodges zisebenza nzima ukuze zifikeleleke, kodwa ikho enye indlela yokuyisa kwinqanaba elilandelayo. Umusa ubonelela ngesiqalo esomeleleyo kwabo bafuna ukuqala okanye ukutshintsha ikhondo lomsebenzi ngenxa yesiphithiphithi esibangelwe yi-COVID-19. IYunivesithi yaseHodges isungule inyathelo elitsha elibizwa ngokuba yi-HU Direct, iCandelo le-Express leYunivesithi yaseHodges.
Olu manyano luzisa amathuba emfundo kunye noqeqesho lwabasebenzi kubahlali, kanye kwindawo abahlala kuyo.
Nxibelelana nathi namhlanje ngeenkcukacha ezithe kratya!
Ngaba i-HU ngqo kuwe?
Ukuba unomdla wokwandisa izakhono zakho emsebenzini, ke i-HU Direct yeyakho!
Zeziphi iikhosi ezifumanekayo kwiiHodges ngqo?
Iiklasi ziya kufumaneka ebusuku nangeempelaveki kwiziko leGoodwill Industries Lehigh Acres Community Resource Centres (CRC). Iikhosi ziya kubandakanya:
IsiNgesi njengoLwimi lwesiBini
IsiNgesi iGrama kwi-Intanethi
Umphathi weSigaba sokuQala
Ubungcali kwindawo yokusebenzela
Indlela eya kubanini beKhaya
Iingcali ezixhasa ngokuthe ngqo
Owona mvuzo wethu mkhulu kukubona ukubonakala kwethemba kunye nokuzithemba okutsha njengoko abafundi befumana ulwazi olutsha kunye nezakhono eziya kubanceda bafeze amaphupha abo. Yimpembelelo entle eya kuthi iqhubele phambili nakwizizukulwana.